ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » 11 ခုနှစ်တွင်ချိန်းတွေ့အကြံဉာဏ်များအတွက်ထိပ်တန်းက Facebook စာမျက်နှာများ 2015
ချိန်းတွေ့နှင့်ရင်းနှီးဘာသာရပ်များလူတွေအမြဲအပေါ်အကြံဥာဏ်လိုအပ်နေကြတယ်. ကျိန်းသေအရည်အချင်းပြည့်ချိန်းတွေ့ကျွမ်းကျင်သူများရှိပါတယ်နေစဉ်သင်တို့ထံမှအကြံဉာဏ်များကိုရှာကြလော့နိုင်, လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်လူမှုရေးကွန်ရက်များပေါ်တွင်ချိန်းတွေ့အကြံဥာဏ်စာမျက်နှာများတွင်ပေါ်ထွက်လာမျက်မြင်ပါပြီ. Facebook ကလောလောဆယ်တွင် operating အကြီးမားဆုံးလူမှုရေးကွန်ရက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်ခြင်းစထိုကဲ့သို့သောစာမျက်နှာများတွင်တစ်အရေအတွက်နေရာဖြစ်သည်.
အခြားသူများထက်ပိုမိုအသုံးဝင်နှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းဖြစ်ကြောင်းချိန်းတွေ့အကြံဉာဏ်အချို့ Facebook စာမျက်နှာများသင်တန်း၏ရှိပါတယ်. အောက်ပါစာရင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိပ်တန်းပါရှိသည် 11. အချိန်ကနေအချိန်အားဤစာမျက်နှာများတွင်စစ်ဆေးခြင်းသင်ချိန်းတွေ့၏ DOS နှင့်လုပ်ရန်၏ပီပြင်စွာအမြင်ကိုပေးစေခြင်းငှါ.
1. ထိပ်တန်း 10 အကောင်းဆုံးချိန်းတွေ့သောဆိုဒ်များ: ဤစာမျက်နှာကိုအခြေခံအားဖြင့် www.top10bestdatingsites.com ၏လူမှုမီဒီယာစာမျက်နှာဖြစ်သည်, ထိပ်အဆင့်က website တစ်ခု 10 မတူညီသောအချက်များပေါ်တွင်အခြေခံသည့်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ. သို့သော်, တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေချိန်းတွေ့အကြံပေးချက်များနှင့်အကြံပြုခြင်းနှင့်အတူချိန်းတွေ့ဆောင်းပါးတွေကို sharing အပေါ်စောင့်ရှောက်; အဲဒီ top10bestdatingsites.com ရက်နေ့တွင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်ရေး-ups နှင့်အခြားဆိုက်များကိုထည့်သွင်း. ၎င်းဆောင်းပါးများကိုဖုံးလွှမ်းလက်အောက်ခံများ၏အကွာအဝေးကိုအကဲဖြတ်ပြီးနောက်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ချိန်းတွေ့ကိစ္စ၏အများစုဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်ဖြေရှင်းချက်အကယ်စင်စစ်သူတို့အထဲ၌ပုန်းအောင်းနေကြသည်ဟုဆိုနိုင်ပါသည်.
2. အမျိုးသားများအဘို့အချိန်းတွေ့အကြောင်းသိကောင်းစရာများ: ထို page ၏နာမတော်ကို၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကို. သို့သော်, သူတို့သည်ဤ page မှအချို့သောဖှယျနှင့်ထိရောက်သောချိန်းတွေ့အကြံဉာဏ်များရလိမ့်မည်ဟုနေစဉ်, အမျိုးသမီးတွေလည်း Like ခလုတ်ကိုနှိပ်ချလိုက်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောသူတို့ရဲ့ဘဝအသက်တာ၌လူတို့ကနားလည်သဘောပေါက်ဖို့ကစစ်ဆေးနေအပေါ်စောင့်နိုင်.
3. ဆက်ဆံရေးနှင့်ချိန်းတွေ့ခြင်း: ဒီတစ်ခုကလူစစ်မှန်သောအသက်ကိုပုံပြင်များမှချိန်းတွေ့နှင့်ဆက်ဆံရေးကိုခန့်မတူညီတဲ့အရာအားသင်ယူအထောက်အကူပြုစာမျက်နှာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
4. ရက်စွဲ Divas: ဒါဟာပြီးသားအချို့တကယ်ကိုအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ယောက်ျားနဲ့လက်ထပ်နေသောအမျိုးသမီးတစ်ဦးတစ်စုက run နေတဲ့စာမျက်နှာဖြစ်ပါတယ်နှင့်ယခုကို http ဟုခေါ် website တစ်ခု run နေ://စျေးသိပ်မကြီးတဲ့တခုခုနဲ့လူတွေကိုကူညီအား www.thedatingdivas.com/, သေးဖန်တီးမှုချိန်းတွေ့စိတ်ကူးများ.
5. ချိန်းတွေ့ & ဆက်ဆံရေးက Dos and DON'Ts: ဤစာမျက်နှာကိုထိပ်တန်းကြားဆက်ဆံရေးကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်များထံမှသင်တို့ချိန်းတွေ့နှင့်ရင်းနှီးသည့်အကြံပြုချက်များကိုမှဆောင်တတ်၏.
6. အင်တာနက်ကိုချိန်းတွေ့ခြင်း၏ရုတ်တရက်လူပျို Girl-DOS နှင့် DON'Ts: သင်ရောနှောဖို့တစ်ခုတည်းနဲ့အပူတပြင်းရောက်နေတယ်ဆိုရင်ဒီအချက်ဟာသင်အမှန်တကယ်အသုံးဝင်ပြီးချိန်းတွေ့အကြံဉာဏ်တခုတခုအပေါ်မှာမျက်စိစောင့်ရှောက်ရမယ်တ FB စာမျက်နှာဖြစ်သည်.
7. Lisa ကို Copeland- အပျော်ချိန်းတွေ့ကိုနဲ့ပြီးတဲ့နောက်လွယ်လွယ်ဘယ်သူချိန်းတွေ့နည်းပြ 50: ၎င်း၏ခေါင်းစဉ်အကြံပြုသည့်အတိုင်း, ဒီ FB စာမျက်နှာ Lisa ကို Copeland ကလည်ပတ်နေသည်. Copeland တစ်ဦးထင်ပေါ်ကျော်ကြား Huffington Post ဘလော့ဂါသည်နှင့်ကျော်အမျိုးသမီးများအဖို့အလွန်ချိန်းတွေ့အကြံဥာဏ်ပေးအထူးသဖြင့်လူသိများသည် 50.
8. Mingle2: ကို http လူကြိုက်အများဆုံးချိန်းတွေ့တဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေတဦး၏အဓိကအားဖြင့် Facebook စာမျက်နှာပေမယ့်://mingle2.com/, Mingle2 ထိရောက်သောချိန်းတွေ့အကြံပေးချက်များရှာနေတစ်ဦးချင်းစီအဘို့ကြီးစွာသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
9. Millionaire ချိန်းတွေ့သောဆိုဒ်များ: သင်တစ်ဦးသန်းကြွယ်ကြပြီးသင့်တော်သောမိတ်ဖက်သို့မဟုတ်အပြန်အလှန်ရှာနေမယ်ဆိုရင်ဤစာမျက်နှာကိုသင်တို့အဘို့ဖြစ်ကြ၏. ဤစာမျက်နှာပေါ်တွင်တင်ထားသောအရေး-ups နှင့် update မှတဆင့်ပေးထားသောအကြံပေးချက်များသိသိသာသာအောင်မြင်မှုအတွက်သင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးမြှင့်စေမည်.
10. အမျိုးသမီးများအဘို့အဆက်ဆံရေးအကြံဉာဏ်အကြောင်းသိကောင်းစရာများချိန်းတွေ့မင်္ဂလာဆောင်အချစ်ဆိုတာ Quotes များအတွက်ချိန်းတွေ့: သင်တစ်ဦးသောမိန်းမဖြစ်ကြောင်းကိုနှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားအဘို့အရက်စွဲချင်တယ်ဆိုရင်, ဒီစာမျက်နှာသင့်အဘို့အချိန်းတွေ့အကြံပေးချက်များ၏ညာဘက်ထားရှိပါတယ်.
11. ဆက်ဆံရေးက, ချိန်းတွေ့, မင်္ဂလာဆောင်နှင့်ကွာရှင်းပြတ်စဲမှု: ဒီ FB page တွင်, သင် masterfully ချိန်းတွေ့၏စင်မြင့်အပါအဝင်ဆက်ဆံရေးအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအဘို့အစင်မြင့်ကိုကိုင်တွယ်အကြံပြုချက်အရလိမ့်မယ်.
ဤ 11 Facebook စာမျက်နှာများဧကန်အမှန်ချိန်းတွေ့အကြံပြုချက်များထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရာပေါင်းများစွာနှင့်ပြည့်စုံလျက်ရှိ. သို့သော်, သေချာသင်သည်လက်ျာမိတ်ဖက်ရစေခြင်းငှါ,, အဲဒီအကြံပြုချက်များအောက်ပါမှတပါးသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဗီဇအတိုင်းအသုံးပြုရမည်.